တောင်ရေးမြောက်ရေး: ၀ါသနာလေးများ(Tag game)
Posted by ဘာတွေတုန်း at 2:38 AM
ကောင်း .. ၏ .. ကျေးဇူး ဘာဘာရေ .. ရေးပေးလို့ .. တက်ချင်တာတောင် နာမည်မစဉ်းစားဘူး .. ကြည့်တဲ့လူအကုန်တဲ့ .. :D
ညီမလေး ဘာဘာက စာတယ်ဖတ်တာကိုး။
ဒါကြောင်း ခေါင်းကြီးက အီးတီလို အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ပုံ ဖြစ်နေတာဖြစ်မယ်။
အင်း တာရာမင်းဝေ မင်းခိုက်စိုးစန် အကြည်တော် ဟာသစာအုပ်များကို ဆိုတော့ ဖတ်တိုင်း တဟီဟီ အမေ့ရှေ့လုပ်ပြတယ်နဲ့တူတယ်။
အစားအသောက် ၀ါသနာပါတာ တူ၏။.
pm ET ပုံလေးဖြစ်ချင်တာလား လို့ ပြန်မေးလိုက်။
သို့ မမမိုးခါးနဲ့မမနေခြည်=> သတိတရနဲ့ tag ဖော်ရတာကိုပဲ ဘာဘာက ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ။
သို့ မမဖြိုးမော်..အိ..ဆောတီး..ကိုဖြိုးမော် => မမခေါ်တာတွေ များလို့ ယောင်သွားတယ်။ ဘာဘာ ခေါင်းကြီး ဦးနှောက်ကြီးတာကို မနာလိုဖြစ်နေတယ်ထင်တယ် .. ဟဲဟဲ..
၀တ္ထုဖတ်ရင် အမေ့ရှေ့မှာ ဟာသလို့ယုံအောင် ရီပြရတာလဲ အမော :P
သို့ ကိုသီဟသစ် =>အစားအသောက် ၀ါသနာပါတာ ကောင်း၏.. pm က ET ဖြစ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာတော့ သူ့မေးကြည့်:D
တိုင်ပြောပလိုက်မယ်။ your mom နဲ့တွေ့ရင်။ :P
အွန်.. တူများ ဘာရုပ်ရို့လဲလို့.. mom နဲ့ တိုင်မယ်တဲ့။ ဟင့်
Fist time come to your side but you are good writer .
Pls keep writing . Thank you so much for your post.